Kali Linux 2020.3 tonga miaraka amin'ny fanovana avy bash ho ZSH, fanatsarana ho an'ny HiDPI ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Ny fanombohana ny ny kinova vaovao amin'ny fizarana Linux malaza amin'ny Pentest "KaliLinux 2020.3”, Izay anehoana fanatsarana isan-karazany ny fisehon'ny fizarana, ary koa ny fanovana lehibe sasany amin'ireo fonosana natolotra.
Ho an'ireo izay tsy zatra ny Kali Linux dia tokony ho fantatrao fa ity rafitra ity dia natao hizaha toetra ireo rafi-kery, fanaraha-maso, famakafakana data sisa ary hamantarana ny vokadratsin'ny fanafihana mahatsiravina.
1 Kali Linux 2020.3 Endri-javatra vaovao lehibe
2 Sintomy ary mahazoa Kali Linux 2020.3
Kali Linux 2020.3 Endri-javatra vaovao lehibe
Amin'ireo lehibe izay atao doka ato amin'ity kinova vaovao ity dia ny fifindra-monina avy any Bash mankany ZSH. Amin'izao fotoana izao amin'ny kinova ankehitriny, ZSH dia tafiditra ho safidy, fa amin'ny kinova manaraka, rehefa nosokafana ny terminal dia hanomboka tsy misy hatak'andro ny ZSH.
Ho an'ireo liana amin'ny fahaizana mifamadika amin'ny ZHS nefa tsy miandry famoahana amin'ny ho avy dia afaka mihazakazaka "chsh -s / bin / zsh").
Ny fanovana hafa ampiharina dia ny fanafainganana ny fametrahana.n, satria amin'ity kinova vaovao ity aroso mba hampitsaharana ny fihazakazahana dist-upgrade mandritra ny fametrahanaSatria ny mpikirakira dia manana ny fonosana ilaina rehetra amin'ny fametrahana ivelan'ny tranonkala foana, fa raha toa ka tsy nanidy ny tamba-jotra ny fametrahana dia mihombo hatrany ny fanavaozana.
Izany no antony ankehitriny aroso fa ny mpampiasa no manao ny fanavaozana izao raha mieritreritra ianao dia fotoana mety izao.
Rehefa mametraka ny rafitra tsy misy fifandraisana amin'ny tamba-jotra ihany koa dia lisitra efa natokana ho an'ny tahiry repositories no atolotra fa tsy rakitra sumber.list tsy misy.
Etsy ankilany, iray amin'ny zava-baovao amin'ity kinova vaovao ity ny fanampiana maharitra ho an'ny fitaovana ARM, ao anatin'izany ny fanovana hanatsarana ny fahombiazan'ny Pinebook, Pinebook Pro, Raspberry Pi, ary ODROID-C.
Ho fanampin'izay, ny birao GNOME dia voafantina mampiasa hoditra vaovao ao amin'ny mpitantana rakitra Nautilus, ankoatry ny fanatsarana ny lamina eo amin'ny takelaka sy ny lohateny misy akany (oh: amin'ny fikirana, ny sidebar dia toa ny fitohizan'ny tontonana ambony).
Y kinova Win-Kex no aroso (Windows + Kali Desktop EXperience), namboarina hihazakazaka amin'ny Windows amin'ny tontolo WSL2 (Windows Subsystem for Linux).
ihany koa nanampy fehezan-dalàna kali-hidpi-mode hanamboarana automativa fanamboarana miasa ny rafitra miaraka amin'ny fisehoana hakitroka pixel avo (HiDPI).
Ary farany, ao anatin'ny doka Navoaka ihany koa ny famotsorana NetHunter 2020.3, tontolo iainana ho an'ny fitaovana finday miorina amin'ny sehatra Android miaraka amin'ny fisafidianana fitaovana hanandramana rafitra ho an'ny marefo.
Amin'ny fampiasana NetHunter, azo atao ny manamarina ny fampiharana ny fanafihana manokana amin'ny fitaovana finday, ohatra, amin'ny alàlan'ny fakana tahaka ny fitaovana USB (BadUSB sy HID Keyboard - fakana tahaka ny adaptatera tambajotra USB izay azo ampiasaina amin'ny fanafihana MITM, na USB fitendry. izay manolo ny toeran'ny olona) sy ny famoronana teboka fidirana sandoka (MANA Evil Access Point).
Fiovana amin'ny NetHunter 2020.3 mariho ny fanampian'ny andiany vaovao an'ny Bluetooth Arsenal, izay misy ny detection-n'ny Bluetooth manokana, ny inspect, ny spoofing ary ny fonosana fonosana ary nanampy fanohanana ireo fitaovana Nokia 3.1 sy Nokia 6.1.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity kinova vaovao ity ianao dia azonao atao ny manamarina ireo pitsopitsony Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Sintomy ary mahazoa Kali Linux 2020.3
Ho an'ireo izay liana te-hanandrana na hametraka mivantana ilay kinova vaovao an'ny distro amin'ny solo-sain'izy ireo, tokony ho fantatr'izy ireo fa afaka maka sary ISO feno izy ireo (3.7 GB) na sary mihena (2.9 GB) izay efa Azo alaina ao amin'ny tranokala ofisialy ny fizarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Kali Linux 2020.3 tonga miaraka amin'ny fanovana avy bash ho ZSH, fanatsarana ho HiDPI sy maro hafa
Kdenlive 20.08 tonga miaraka amina sehatr'asa vaovao sy maro hafa